Maxaad Kala Socotaa Qaabkii Ay Idaacadda BBC Markii Koowaad U Baahisay Geeridii Adolf Hitler Isla Maalintii La Sheegay In Uu Is Dilay – Weheliye.com
Maxaad Kala Socotaa Qaabkii Ay Idaacadda BBC Markii Koowaad U Baahisay Geeridii Adolf Hitler Isla Maalintii La Sheegay In Uu Is Dilay
June 19, 2018 A.Hussein Xulashada 0
Waxa ay ahayd xilli maqrib ah 1-dii bishii May, 1945kii, waxaana xafiiska BBC-da ee Reading , oo ku aadan galbeedka London ka shaqaynayay Karl Lehmann. Xilligaas ciidamo midoowgii Soviet ayaa kusoo dhawaanayay magaalada Barlin, dagaalkii Jarmalka waxa uu gaadhay heerarkii ugu dambeeyay. Mr Lehman oo 24 jir ahaa ayaa dhegta ku hayay idaacada Jarmalka markii uu maqlay ogaysiis ah in dhagaystayaasha loosoo wado war weyn, waxaana lagu xijiyay muusig murugo leh. Kadibna waxa la baahiyay in uu geeriyooday Hilter isaga oo dagaal ku jira.
Karl oo ka mid ahaa dadkii kasoo qaxay gumaadkii naasiyiinta Jarmalka ayaa ka shaqaynayay qeybta kormeerka ee BBC-da, taas oo la taagay dagaalkii labaad bilowgiisii si loola socdo warbaahinta Jarmalka si dhagaystayaasha Britain loola socodsiiyo dhaqdhaqaaqa ciidamada Jarmalka iyo xulufadooda. Lix maalmood kadib ayay dowladdii Jarmalku is dhiibtay markii uu dhintay Hitler. Inkasta oo aanu shaki ku jirin in uu Hitler dhintay, haddana waxaa dib kasoo baxday in uu isagu is dilay.
Geerida Hitler ee raadiyaha Jarmalka laga baahiyay waxaa markiiba turjumay Ernst Gombrich oo ahaa madaxa kooxda turjumayaasha Jarmalka ee BBC-da ka hawlgalayay. Warkii ayaa markii dambe laga baahiyay BBC-da, iyada oo dadweynuhu ay warkaasi farxadda lahaa aad ugu dabbaal dageen.
Karl oo hadda 97 jir ah ayaa aad u xusuusta wixii maalintaas dhacay. Farxaddiisu waxa ay ahayd in uu dib ula kulmi doono qoyskiisa oo uu kasoo qaxay. Illaa kun qof ayaa ka shaqaynaysay qeybta kormeerka ee BBC-da xilligaas ay dagaaladu socdeen, kooxda Jarmalka ahna waxa ay dhanaayeen 40 qof oo isugu jira dad yuhuud ah iyo horusocod ah.
Nin Muslim Ah Oo Dalka Hindiya Loo Dilay Neef Lo’ Ah Oo Uu Gawracay Iyo Cabsi Laga Qabo In Ay Isku Dhacaan Laba Qawmiyadood
Caasimad Afrikaan Ah Oo Laga Mamnuucay In Masaakiintu Ku Dhex Dawarsadaan Wadooyinka Iyo Dadka Oo Soo Dhaweeyey!